सावधान ! नेपालमा को-रोना महामारीकै बेला फेरि अर्को त्रा`स फैलियो, बेलैमा ख्याल पुर्याउन आग्रह - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियसावधान ! नेपालमा को-रोना महामारीकै बेला फेरि अर्को त्रा`स फैलियो, बेलैमा ख्याल पुर्याउन आग्रह
सावधान ! नेपालमा को-रोना महामारीकै बेला फेरि अर्को त्रा`स फैलियो, बेलैमा ख्याल पुर्याउन आग्रह
सावधान ! नेपालमा को-रोना महामारीकै बेला फेरि अर्को त्रा`स फैलियो, बेलैमा ख्याल पुर्याउन आग्रह । को- रोना महामारीकै बेला अर्को त्रा-स थपिएको छ, निपाह भाइरस ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन -डब्लूएचओ- ले महामारी ल्याउन सक्ने १० प्राणघा-तक रोगभित्र यसलाई राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले निपाहको जोखिम नेपालमा उच्च रहेको बताए ।
‘छिमेकी मुलुकमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । भारतबाट संक्रमित च-मेरो, फलफूल खान नेपालको तराई आउन सक्छ,’ सहप्रवक्ता डा। अधिकारीले भने । फलफूल खाने फ्रुट ब्याट प्रजातिको संक्रमित चमेरोले यो भाइरस सार्ने पाइएको छ ।
डा। अधिकारीका अनुसार निपाहबाट हुने मृ-त्युदर को-भिड–१९ को तुलनामा उच्च छ । जसको मृ-त्युदर ४५ देखि ७५ प्रतिशत छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मृ-तकको संख्या १२ पुगेको छ ।
भारतको दक्षिणी राज्य कोरलामा एक नर्ससहित १० जनाको ज्या-न गइसकेको त्यहाँका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनले बताएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रहेकाे छ ।